Ụbọchị My Pet » 10 Ụzọ Iji Mepụta A Bodacious Bachelorette Kedo akwa!
"E nweghị onye ebe ka ụlọ anyị."—Ọkachamara nke Oz
Ma ị na-akpa online, anya, ma ọ bụ na-na nzuzo mikpuru ke ọrụ romance, -emesịa "ọnọdụ" n'ihi na ịhụnanya unu akụkọ a ga-eme gị ebe.
Na dị ka ya ma ọ bụ, gị ụlọ, home, ma ọ bụ nkịkara ụlọ, ekwu ọtụtụ ihe banyere onye ị bụ na gị njirimara. Dị nnọọ ka unu uwe, ọ agwa ukwuu banyere àgwà gị na ndụ.
Gịnị ka gị na-ekwu banyere gị?
Ọ bụrụ na ị ga-amasị gị ikwu na ị na-ọlụlụ, ma ọ bụ minimally onye kwesịrị nghọta si na na na-amatakwu, tụlee ndị a adọ Atụmatụ.
Decorating DO na DON'TS
1. Na-eme ka gị na ebe a pụrụ iche, -akpali echiche nke onye ị bụ.
Ma ọ bụ whimsical, mgbe ochie, ma ọ bụ obi ike na bodacious, etinye gị onwe gị na atụ ogho na ya.
Nke ahụ bụ ịma mma nke na-enwe na gị onwe gị ntụpọ: gị ohere, gị uto!
Ihe i nwere ike gbagote na. Gbalịa na ijikọta dị iche iche na agba, ekwekọghị, textures, na ọbụna oge. Mgbe mbụ nkebi, adịghị etinye ego a otutu ego ruo mgbe ị na-n'aka na ihe suut àgwà gị na ndụ.
3. Tụlee akparamaagwa nke na agba.
Ị maara na ụfọdụ hues nwere mmetụta na otú ị na-eche ma na-eche na a akpan akpan ụlọ ma ọ bụ ọnọdụ? Dị ka ọmụmaatụ, agba aja aja na ụwa ụda agba na-nọrọ jụụ; mgbe na agba dị ka acha uhie uhie na oroma na-tọkwara. Ulo oru na-eji agba ọgwụ mgbe niile na-amị ụfọdụ chọrọ Ibọrọ. Unu ga-kwa.
4. Nọgidenụ na-ebe mma ma dị mma n'anya.
Mama gị ziri ezi. Ọ bụghị nanị na nke a na-eme na-eme ka eke a mma echiche na-abụghị nwoke ibe, ọ na-aga a ogologo ụzọ n'ebe na-azọpụta gị oge na ego.
5. "Oge ntoju ebe ị na-kụrụ."
Ịzụlite a bit nke okike nọ n'ime bụ mgbe a smart aga. Osisi ịmepụta otu ikuku nke ịhụnanya na nkasi obi. Ha na-aka na-enye ezi ikuku àgwà. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-amụ adịghị a "green isi mkpịsị aka,"E nwere dị iche iche nke osisi ndị na-achọ na-erughị" ejiji "karịa gị anu ulo. Ihe ziri ezi? Google "mfe na-eto eto osisi" ma ọ bụ gaa na mpaghara gị Home ebusa n'Ubi ngalaba maka enyemaka.
6. Tụlee egosipụta nke nkata.
M hụrụ n'anya nkata! Ị ga kwa. Ha na-ego, mara mma, na mfe.
Jiri ha maka nchekwa: jide Pita ji egwuri egwu, Akwa nhicha ahụ, CD, flavored teas, ma ọ bụ dị ka ji achọ nkà iberibe enịm putara ighe na mgbidi. Na Na Na na dakọtara iche iche na agba, nha ma kpaa ihe nakawa etu esi nke kacha mmetụta.
7. Gburugburu ya na ihe ị hụrụ n'anya.
Ọ bụrụ na ị a music n'anya, ọ pụrụ ịbụ na a guitar ma ọ bụ drum. Ọ pụrụ ịbụ mara mma, ji achọ osisi na "ụlọ" photos nke gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ anu ulo. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-eme njem, ikekwe ị pụrụ igosipụta oyiyi nke dị pụọ na ebe a ụwa ma ọ bụ abụọ. Tinye ka a, ụfọdụ esi ísì ụtọ kandụl, ma ọ bụ a obi iru ala iyi, n'ihi na a mara mma finishing aka.
8. Elegharala ime na kichin.
Ọ bụ ebe ọtụtụ ndị di na nwunye na-eji ihe dị ukwuu nke oge na-ekere òkè nri, fun, na-eke na-adịgide adịgide na-echeta.
9. Ụlọ ahịa na otu n'usoro nke venues maka kacha mma Mkpughe.
Ị nwere ike akara ụfọdụ oké ihe n'ebe dị ka gị obodo Family Dollar, àgwà nregharị ngwaahịa na-echekwa, ala na ụlọ ahịa na ejigoro ahịa, na ọbụna Craigslist.
10. Jide n'aka na-ewe tupu mgbe foto.
Ọ 'ga-enye gị oké nke ịrụpụta ihe na-atọ ụtọ, na echiche bara uru maka ọdịnihu nkwalite.
Na mmiri ihicha na mmiri, e nwere ihe adịghị mma oge iji wepụ ma mara gị ebe!